Amniga Muqdisho oo si adag looga shiray & Go’aano laga soo saaray | Somalia News
Amniga Muqdisho oo si adag looga shiray & Go’aano laga soo saaray
Guddoomiye ku-xigeenada Maamulka Gobolka Banaadir ee Maamulka iyo Maaliyadda, Howlaha Guud iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Qeybta Guud ee Gobolka Banaadir ayaa kormeer amni ku tagay qeybo ka mid ah degmooyinka Dayniile, Yaaqshiid iyo Deegaanka Daarusalaam.
Madaxda Maamulka Gobolka Banaadir iyo Taliska Booliska ayaa waxa ay shir la qaateen Taliyeyaasha qeybaha iyo kuwa Saldhigyada 17 Degmo, iyadoona kulankaas uu socday saacado dhowr ah.
Shirka ayaa inta uu socday ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Caasimadda dalka, sidii loo dardar-gelin lahaa howlaha sugida amniga Magaalada Muqdisho iyo la shaqeynta shacabka.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo warbaahinta la hdlay ayaa waxaa uu sheegay in shirarka looga hadlayo amniga Caasimadda ay sii socon doonaan iyo howlaha kormeerka ee lagu sameeynayo degmooyinka Gobolka.
The post Amniga Muqdisho oo si adag looga shiray & Go’aano laga soo saaray appeared first on Somali News Leader.
Previous articleDeganaan Saaka Ka Jirta Goobihii Lagu Dagaalamay Ee Gobolka Galgaduud
Next articlemore than 60 rich countries are mobilizing for global access to the vaccine